Igwe ihe nkpuchi Jet Fluidized-bed bụ n'ezie ngwaọrụ dị otú ahụ nke na-eji ikuku dị elu na-agba ọsọ iji mee ụdị akụrụngwa akọrọ. N'ịbụ nke ikuku na-agbakọ, a na-eme ka ihe onwunwe dị ngwa gaa na-agafe nke anọ nozzles ka ọ na-emetụta ma na-egweri site na ikuku na-asọ asọ na mpaghara igwe, na-emetụta
Enweghị ịrị elu na ọnọdụ okpomọkụ: ọnọdụ okpomọkụ agaghị abawanye ka a na-akụghasị ihe ndị ahụ n'okpuru ọnọdụ ọrụ nke mmụba ọkụ ọkụ ma ọnọdụ okpomọkụ dị na oghere na-egwe ọka na-adịkarị.
Jet Mill ejiri na Lab, onye ụkpụrụ ya dabere na ụkpụrụ nke bedetị mmiri Jet Mill bụ ngwaọrụ dị ka iji oke ikuku na-agba ọsọ iji mee ụdị akachasị akọrọ. A na - eme ka ọka ndị ahụ dị ngwa ngwa na ikuku dị elu.
Dị Disc (Ultrasonic / Pancake) Jet Mill. Opekpụrụ Ọrụ: Site na ikuku ikuku site na inye nri injectors material ihe akụrụngwa na-ebuwanye ọsọ gaa na ngwa ngwa ultrasonic ma gbanye ya n'ime ụlọ milling na ntuziaka dị mkpa, na-agbakọta ma na-egweri na irighiri.
Ngwongwo jet na-echekwa nitrogen na-eji gas nitrogen eme ihe maka mgbasa ozi maka ikuku nke ikuku iji mezuo ihe ndi ozo.
Onye na-agba akwụkwọ turbine, dị ka onye a na-amanye grader centrifugal na ntinye ikuku nke abụọ na ntụgharị ntụgharị grading na-eme nke rotator, ndu vane rectifier na ịghasa feeder.
Jet Mill eji na ụlọ nyocha, onye ụkpụrụ bụ: Chụpụrụ site abịakọrọ ikuku site udia injectors ， akụrụngwa na-accelerated ka ultrasonic ọsọ na agbara ndi na-egwe ọka n'ime ulo na tangential direction, collided na Mike n'ime urughuru.